Ungayibuyisa kanjani ifoni ye-Android: Umhlahlandlela Ophelele ku-2020
Ungayisebenzisa Kanjani Isipele Sefoni ye-Android: Umhlahlandlela Ophelele ku-2020
Kugcine ukubuyekezwa ngoJuni 16, 2020 ngu-Ian McEwan
Kunesidingo sokusekela ifoni yakho ye-Android
Izingcingo zethu zeselula sezingaphezu nje kwento yokuxhumana, ziba yisici sokuxhumana kwethu nomhlaba. Ukusuka koxhumana nabo kuya ku-imeyili ukuthumela ezithombeni kuya emculweni nakho konke okuphakathi, izingcingo zethu eziphathwayo zigcina izimpilo zethu kuzo kanye nama-zeros.
Ukuba yithuluzi elintekenteke lobuchwepheshe, kudinga ukunakekelwa okuthile, futhi ngisho nokuqikelela kwethu sonke sike sabhekana nosizi lwefoni elahlekile noma ukuwa kwesistimu lapho ulahlekelwa yiyo yonke leyo mininingwane yempilo. Lokhu kunjalo kungani kunokugcizelelwa okunjalo ekusekeleni amadivaysi ethu.
Njengomsebenzisi wefoni we-Android, ngisebenzise izinhlelo ezimbalwa zesipele ezitholakalayo futhi ngibe nempumelelo exubile. Kodwa-ke, futhi ngibonile ukuthi kunezindlela ezahlukahlukene zokusekelayo izingcingo namathebulethi we-Android kepha hhayi zonke ezisebenziseka kalula. Masibehkane nayo, uma inqubo yokusekela ifoni yakho ye-Android iyinkimbinkimbi akunakwenzeka ukuthi uyenze kaningi. Ngokubheka ukuthi umthetho ojwayelekile wesithupha wamadivayisi eselula, ukusekela ifoni yakho ye-Android okungenani kanye ngenyanga, uma kungenjalo ngaphezulu.
Ngakho-ke, ingabe kukhona isicelo esilula, esilula ukusebenzisa ibhekhaphu ye-Android uphinde ubuyisele? Impendulo elula ithi - YEBO. Ekusizeni kwami ​​isicelo “esingcono kakhulu,” ngithole uhlelo lokusebenza olubizwa nge- “Fonelab” lamadivayisi we-Android. Futhi yindlela elula kakhulu yokwenza isipele ye-Android. Ukulungisa izingcingo ze-Android, unezindlela ze-2, isipele ku-PC yakho noma isipele nge-Google.
Ungawenza Kanjani Isipele se-Android
Into kodwa, uma iqhathaniswa nenye i-OS enkulu emakethe yamaselula, lezi zindlela zonke zibonakala zincane futhi zinde.
Yilapho uFonelab enza wonke umehluko. Lolu hlelo lokusebenza oluncane lunikeza wonke amakhono ofuna ukulwenza isipele ifoni yakho ye-Android. Futhi-ke, futhi inikeza leyo nketho yokubuyisela ifoni uma uyidinga.
Thwebula Isipele Sedatha ye-AndroidK futhi Buyisela. Uma isifakiwe kwi-PC yakho, usukulungele ukufaka isipele ngokuphepha futhi kalula idatha yakho. Kuzo zonke izindlela ezikhona zesipele se-Android, lena elula kunazo zonke.
Landa Isipele se-Android uphinde ubuyisele MAHHALA Manje! Thenga Isipele se-Android uphinde ubuyisele Manje!
I-OneC Click to Backup Idatha ye-Android kusuka kunoma yimaphi amadivayisi we-Android ukuya kwi-PC.
Izinyathelo Zokwenza Isipele se-Android Nge-Isipele Sedatha ye-Android & Buyisela
Isinyathelo 1 Landa bese ufaka uhlelo lokusebenza kwi-PC yakho.
Isinyathelo 2 Xhuma ifoni yakho kwi-PC yakho nge-USB ngentambo ye-USB. Uma uvula uhlelo, uzobona ukuthi iyayibona ifoni yakho futhi ifoni yakho ingabuza ukuthi uyayethemba ikhompyutha, thepha u-YES futhi usukulungele.
Isinyathelo 3 Kuhlelo lokusebenza khetha okulandelayo kumenyu, Isipele sedatha ye-Android & Buyisela, bese Isipele sedatha yedivayisi. Uzobona ukuthi uhlelo lokusebenza luzoklelisa imininingwane kwifoni yakho. Ungakwazi ukwenza isipele yonke into noma ungakhetha idatha ethile ukuze wenze isipele.
Isinyathelo 4 Chofoza Qala. Uhlelo lokusebenza luzokuvumela ukuthi ungeze iphasiwedi kubhekhaphu uma uthanda, futhi uma usuqedile kuzokwazisa.
Kulabo abafuna ukwazi nge-Android Buyisela
Isinyathelo 1 Landa uhlelo bese ulufaka ku-PC yakho uma ungenayo. Uma wenza, xhuma ifoni yakho bese uvula uhlelo bese ukhetha, Buyisela Idatha Kwimenyu.
Isinyathelo 2 Uhlelo lokusebenza luzoklelisa ama-backups owalondoloze kwi-PC yakho. Khetha i-database ongathanda ukuyibuyisela. Ungase futhi ukhethe amafayela athile ngaphakathi kwedatha yokubuyisa ukuze ubuyisele kufoni yakho ye-Android.
Isinyathelo 3 Uma usukhethile amafayela ofuna ukuwavuselela bese uqhafaza ekuqaleni ukuqeda inqubo.
Usebenzisa i-Fonelab Android Data Backup & Buyisela kulula kakhulu kunenye indlela engiyisebenzisile. Uma ngiqhathanisa nendlela esekwe efwini nge-Google, ngithole ukuthi uFonelab akadingi ukuthi usethe noma yini ocingweni lwakho. Inqubo elula yokuxhuma bese uqhafaza. Kulula ngangokunokwenzeka futhi kube lula ukuya kulo msebenzi owufisayo.
Akudingekile futhi ukuthi ube nokuxhumana kwedatha ocingweni lwakho ukuqedela inqubo yokusekelayo noma yokubuyisela emuva. Ngakho-ke, uma ifoni yakho ye-Android yonakele futhi ingakwazi ukuxhuma kwinethiwekhi yeselula, usakwazi ukuyixhuma kwi-PC yakho bese usebenzisa i-Fonelab Android Data Backup & Buyisela ukuthola imininingwane yakho. Uhlelo lokusebenza lubuye luhambisane nayo yonke imikhiqizo yefoni enkulu ye-Android.
Lokhu kwenza uFonelab abe yisoftware elula kakhulu nesebenziseka kalula kunazo zonke ze-Android engake ngasebenzisa, ngincoma uFonelab kakhulu nganoma yimuphi umsebenzisi wefoni we-Android.
Isipele nokubuyisa Idatha ye-Android
Isipele se-SMS kusuka ku-Android kuya ku-PC
Isipele Esithinta ku-Android
Izinhlelo Zokusebenza Eziyisisekelo Ze-Android
Isipele se-SMS ku-Samsung
Oxhumana Nakho Backup on Samsung
Isipele yedatha yefoni ye-Samsung
Isipele se-Android App
Isipele sevidiyo kusuka ku-Android kuya ku-PC